Ahoana ny fampiasana an'i Bandicam
Ny programa Bandicam dia ampiasaina rehefa mila mamonjy lahatsary ianao amin'ny alalan'ny ordinatera. Raha manoratra tranonkala, video tutorials na fandaharana lalao ianao, ity programa ity dia hanampy anao. Ity lahatsoratra ity dia hijery ny fomba fampiasana ireo sehatra fototra ao amin'ny Bandikam mba hanatontosana ny horonantsarimihetsika lahatsary lehibe ary afaka hizara azy ireo.
Ahoana ny fanesorana ny sanda famantarana ny Bandicam amin'ny lahatsary
Ireo mpampiasa ny dikan-teny malalaka ao amin'ny Bandicam dia mahafantatra ny toe-javatra rehefa hita ao amin'ny lahatsary nalaina ny sanda famantarana ny Bandicam. Mazava ho azy, miteraka olana amin'ny fampiasana ara-barotra sy ny fametrahana ny sari-tanany manokana. Ho an'ny fampiasana matihanina dia tsy ilaina mihitsy izany. Mba hanesorana azy dia mila manao dingana vitsivitsy ianao.
Ahoana ny fomba hanovana ilay feo ao amin'ny Bandicam
Rehefa manoratra horonantsary mampiasa an'i Bandicam ianao, dia mila manova ny feonao manokana. Eritrereto hoe ianao no sambany voalohany ary somary saro-kenatra ny feonao, na maniry fotsiny ny handefa feo kely. Ity lahatsoratra ity dia hijery ny fomba ahafahanao manova ny feo ao anatin'ilay lahatsary. Tsy afaka manova ilay feo mivantana ao amin'ny Bandicam.
Fomba hisafidianana varavarankonana kinendry any Bandicam
Ny fisafidianana ny varavarankon'ny lozika any Bandicam dia ilaina amin'ny tranga toy ireny rehefa manoratra horonantsary avy amin'ny lalao na programa isika. Izany dia mamela ny hitifitra tanteraka ny faritra izay voafetra amin'ny fikandran'ny programa ary tsy mila manitsy ny haben'ny lahatsary isika amin'ny fomba mahazatra. Ny famintinana ny varavarankely iray ao Bandikami miaraka amin'ny programa mahaliana antsika dia tsotra.
Tena malaza ao amin'ny You Tube ny lahatsary misy tsikera sy ny lalan'ny ordinatera. Raha te-hanangona mpanjifa be dia be ianao ary hampiseho ny zava-bita amin'ny lalao - dia tsy maintsy asehonao mivantana avy ao amin'ny ordinatera mampiasa an'i Bandicam. Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery sary maromaro manan-danja isika izay hanampy anao hitifitra lahatsary amin'ny alalan'ny Bandikam amin'ny lalao lalao.
Ahoana ny fisoratana anarana ao amin'ny Bandicam
Ny fangatahana amin'ny Bandicam dia ilaina mba hampitombo ny habeny lehibe indrindra ary tsy hampiasa ny mari-pànan'ny programa. Eritrereto hoe efa nandefasanao an'i Bandik, efa nahazatra ny tenanao tamin'ny asany ianao ary te hampiasa manontolo ny fandaharana. Ny fanoratana dia midika hoe mividy programa amin'ny fepetra sasany, ohatra, amin'ny solosaina iray na roa.
Ahoana no hanitsiana ny feony ao Bandicam
Ny fampihetseham-peo mahitsy rehefa mandre ny lahatsary avy amin'ny efijeran'ny ordinatera dia tena zava-dehibe amin'ny fampiratiana fitaovana fanofanana na fampisehoana an-tserasera. Amin'ity lahatsoratra ity, hanazava ny fomba hanoroana ny feo tena tsara ao Bandicam, fandaharana iray handraisana horonantsary avy amin'ny efijery ordinatera. Download Bandicam Ahoana ny fomba fanoratana ny feo ao amin'ny Bandicam 1.
Ahoana ny hamadika ny mikrô amin'ny Bandicam
Mpisera iray izay matetika manoratra horonan-tsary avy amin'ny ordinateran'ny ordinatera dia mety hanontany ny fomba hananganana an'i Bandikami mba hahafahanao maheno ahy, satria ny fanoratana tranonkala iray, lesona, na fampisehoana an-tserasera dia tsy ampy ny fizotry ny horonantsary; Ny programa Bandicam dia ahafahanao mampiasa ny tranonkala, na amboamboarina na plug-in mikrô, mba hanoratana ny kabariny ary hahazo feo tsara sy mendrika kokoa.
Bandicam Codec Initialization Error - Ahoana no hamahana azy?
Hadisoana fanombohan'ny codec - olana iray mahatonga ny sarotra ny manoratra horonantsary amin'ny efijery amin'ny ordinatera. Taorian'ny fitifirana dia manomboka ny varavarankely iray ary mety hikatona ny programa. Ahoana no hamahana ity olana ity sy horonan-tsarimihetsika? Ny fahadisoana voalohany amin'ny codec H264 dia mety mifandraika amin'ny fifandonana eo amin'ireo mpamily Bandicam sy ny karatra video.
https://termotools.com mg.termotools.com © Bandicam 2019